Orinasa sy mpanamboatra fonosana opto-elektronika ao Shina | Jitai
Misy karazana fonosana opto-électronics isan-karazany, ny firafitra dia samy hafa amin'ny famolavolana fantsona opto. Ny fanamboarana fonosana dia tokony misafidy fomba famolavolana sy famolavolana hafa. Ity paackage andiany ity dia mety amin'ny fivorian'ny fitaovana opto-elektronika.
* Karazan-drafitra isan-karazany ho an'ny fonosana, miaraka amin'ny firafitry ny fantsom-pohy na ny cap window.
* Karazan-pitaovana isan-karazany amin'ny fonosana, tokony ho safidin'ny fonosana fonosana izany.
* Misy ny fitaritana ny fizarana mahitsizoro na ny fizarana miampita boribory.
* Ny fitarihana dia mivoaka avy any ambany na amin'ny sisin-dàlana ary ny fiorenan'ny laharana dia mety isaky ny famolavolana ny filan'ny mpanjifa.
* Ny famehezana cap na ny famehezana ny sarony dia nofidin'ny teknolojia mety araka ny firafitry ny fonosana.
* Misafidy fonosana feno plastika Au ny mpanjifa na mitarika plating Au mifidy izay ilain'izy ireo.
Ny fonosana vy misy ny fitaovana opto-électronics dia tokony hijoro 、 miaro ny puce opto-électronics fitaovana ary mandray anjara amin'ny fandefasana ireo signal opto, manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ireo masonkarena opto sy ny fahamendrehan'ny fitaovana. fitaovana midadasika sy midadasika kokoa, mitaky kalitao avo kokoa sy avo kokoa izy io. Mampiasa fananganana famehezana hermetika izy io izay mampitombo ny vanim-potoana lava azo itokisana ho an'ny fitaovana.
Ny orinasanay dia manana teknikan'ny famokarana matotra, misy fampisehoana lehibe amin'ireto manaraka ireto:
①Ny fisafidianana fitaovana: misy ny fihenjanana anatiny aorian'ny fitaovana anatiny solder ny fonosana raikitra, mba hampidina ny adin-tsaina anatiny ny fitaovana amin'ny2929 dia tokony hofidian'ny CTE saika azo ampiasaina amin'ny famehezana mifanentana izay mitaky ireo fitaovana manana CTE mitovy amin'izany. ny fitaovana enti-mitarika dia tokony misafidy ny 4,429. Ny fitaovan'ny insatera fitaratra dia tokony hifidy ny herin'ny BH Japoney manana fitoviana amin'ny 4,329 ao amin'ny CTE.
②Ny teknika fanodinana oksika, teknika lehibe amin'ny fomba sivana. Ny teknikan'ny fihenan-tsika dia mamela azota ao anaty fatana misy oksidana izay tokony hofehezina ao ambanin'ny flowmeter. Mitazona ny satan'ny fihenan-tsakafo amin'ny mari-pana sasany izy ary farany mamorona sosona oksiôma matevina matevina. Ny firafitra dia ny Fe2O4 sy ny FeO aorian'ny famakafakana ny diffractormeter sosona X-ray. Ny oksida dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famehezana fitaratra-amin'ny-metaly tsara voatondron'ny literatiora antontan-taratasy.
ProcedureNy fomba fanamoriana dia ahitana ny fihenan'ny mari-pana, ny tontolo iainana ary ny fotoana anaovana sinter, ny fampangatsiahana ary ny sns. Ny maripana fanasivanana dia tsy tokony ho avo loatra ka hampitombo ny habetsaky ny entona voaroba ao anaty ranon-vera. Gazy be loatra no mivadika mibontsina noho ny tsy fanodinkodinana. Izy io dia misy fiantraikany lehibe amin'ny tombo-kase famehezana sy ny fanoherana ny insulation ary amin'ny ambaratonga ambany kokoa dia tsy afaka manitrika ny lasitra sy vy ny hatevin'ny tetezamita dia manify loatra sy ambany ny tombo-kase mamefy. Miaraka amin'ny hafanana haingana dia haingana ny tampon'ny insulator fitaratra mba tsy hahafahan'ny bubble be loatra Miakatra ny fotoana ary koa ny miboiboika anaty. Ankoatr'izay ny hamandoan'ny fatana fandoroana dia lehibe loatra, ny etona kosa dia levona amin'ny alàlan'ny rano fitaratra amin'ny hafanana avo ary miakatra miboiboika aorian'ny fieritreretana azy. Ka ny teknikan'ny teknika telo ao anaty lafaoro mandritra ny fomba fanivanana dia ny tontolo iainana 、 maripana 、 fotoana izay mitana andraikitra lehibe amin'ny famehezana ny kalitao. Miorina amin'ny fanoratana an-tsoratra ny tontolo iainana manota dia tsara kokoa ho an'ny reducibility tsy miandany na osa.
④Ny teknikan'ny electroplating, ny firakotra ny etona dia fanalahidin'ny fisehoan'ny vokatra requirement fitakiana fifamatorana sy ny fahaizany mampiorina .Ny orinasantsika dia mampiasa electrolytic Ni tanteraka amin'ny alàlan'ny ploly Au ary feno ny endriny Au ary ny endrika sy fatorana pin dia tokony hanaraka ny fepetra takiana.
Misy tombony ho an'ny fonosana elektronika opto-elektronika vita amin'ny teknikanay ankehitriny:
①Misy enina avy amin'ny fisehoana ny refin-insulator vera dia mitovy ary tsy misy fiakarana, tsy misy nono, tsy misy bubble sns.
②Enina avy amin'ny fampisehoana, avo ny fanoherana insulation.
③Matanjaka ny ADhension amin'ny sarona
④Matanjaka ny tanjaka
⑤Ny adin-tsaina amin'ny fametahana Ni dia kely ary ny tanjaky ny havizanana manohitra firaka dia lehibe.
⑥Ny fanoherana ny hafanana avo, ny fitrandrahana oksidia, ny fiakarana ary ny fahanterana ho an'ny fonosana dia matanjaka be.
⑦Ny hermetisialy azo itokisana no vokatra.
Previous: Ireo mpandray anjara elektronika
Manaraka: Kitapo Sensor Pressure
Fonosana Hermetic ho an'ny singa optoelektronika
Ireo mpandray anjara elektronika